ILeica Airborne CityMapper - isisombululo esinomdla kwimephu yedolophu- iGeofumadas
NgoDisemba, 2018 Zobunjineli, Topography
Kulindeleke ukuba singaze siyibone iSmartCity eyinyani, kunye nombono wayo oqinisekileyo. Kungenzeka ukuba kukho iimfuno ezisisiseko kwiimeko zethu kunokucinga nge-Intanethi yezinto. Nokuba zeziphi na izisombululo ezenziwa ngabavelisi, akukho mntu ubabuzileyo. Inyani yile yokuba ugqatso lokuzibeka kuhlaziyo olulandelayo lokuba ishishini liza kusebenza njani kwixa elizayo likhona, kwaye akukho lunye ukhetho ngaphandle kokuzama ukuqonda apho izinto zihamba khona.
Nangona esiphelweni seli nqaku siza kugxila kwisisombululo seLeica- isihloko esithe sanalo ixesha lokuthetha sikhatshwa yitreyi yePaisa kunye noLaura waseSwitzerland noPedro waseBrazil, kwisakhelo seCongress yeInternational American Network of Land Registry eBogotá- kunomdla ukubona ukuba kwimeko yokufumana ubunyani, abo bakhuphisana nabo bathatha iinzame zabo. Kwelinye icala, i-ESRI / i-AutoDesk kunye nokukhangela indibaniselwano ye-BIM / GIS bume kunye nesisombululo CityEngine, IBentley / Siemens kunye neTwin CityPlanner. Kwimeko ye-Hexagon kunye nesixhobo Leica CityMapper. Inye inezinto ezahlukileyo ezahlukileyo, kodwa zonke zikumlo wokudibanisa kwinqanaba lokwenyani lokuhamba okuphuma ekubanjweni kwedatha, ukumodareyitha, uyilo, ulwakhiwo, ukusebenza kunye nomjikelo wobomi phantsi komjikelo Inkqubo I-BIM yeH Hub level 3.
Ezi nokuphuma yahlukana iminyaka emininzi, kodwa kuya kuba nzima ukuba umahluko ngokwahlukana kwabo, kuba nje ukuba ukhangela indlela തിരിച്ചറിയല് ukuqondwa, imbono isalungiswa kodwa apho geomatics kunye iinjineli ukuba amehlo akho; kuba ukubonakala kwayo kwidatha, iinkqubo kunye neteknoloji kuya kwenzeka kwiminyaka elishumi ezayo.
Ukususela kwi-Fourth Industrial Revolution (4IR), ii-SmartCities kunye ne-intanethi yezinto
Isiseko salo msi sisengqiqweni. Njani into entsha inegalelo ekwenzeni lula imisebenzi eyenziwa ngabantu. I-injini yomphunga yayililinge elibalulekileyo lokukhawulezisa iinkqubo, emva koko indaleko yaqhubeka de kwafunyanwa umbane, kwaye emva koko ukwenziwa kweekhompyuter njengezixhobo eziyimfuneko xa kusetyenzwa; Ezi zinto zintathu zokuyila zinxulunyaniswa notshintsho olwenziweyo kwimizi-mveliso emithathu edlulileyo.
Okwangoku, ihlabathi lijongene nesine-revolution esekelwe kwiminyaka yobudijithali, ngokuqinisekileyo ukuba iteknoloji iyafikeleleka kubo bonke kwaye isetyenziselwa ukuzuza uluntu; ngaloo ndlela unako ukusebenzisa iiplani zokwabiwa kwamanzi ngolwazi (i-Cloud / BigData), ingqiqo yolwazi (AI), i-biotechnology kunye neenzwa ukufumana ulwazi olukhawulezayo malunga neemeko, ukubeka esweni kunye nendawo yezibonelelo.
Sikwixesha apho zonke iingcali, nokuba ziphi na intsimi yazo, zinokusebenzisa ubuchwephesha njengamadlelane ukukhuthaza ukukhula kwemimandla yazo. Inkqubela phambili kunye nobuchwephesha bezobuchwephesha zivelise utshintsho olubalulekileyo kwizithuba -yimeko yolwakhiwo- kwaye ayisekho ukuthanda kwabaninzi, kodwa ibango lomxholo omiweyo. Zonke ezi nkqubela phambili zifuna ukunika indlela kwizinto ezibizwa ngokuba zii-SmartCities; yimixholo efuna unxibelelwano kunxibelelwano phakathi kwabasebenzi, iitekhnoloji, ulawulo lolwazi, kunye nokuziqhelanisa nokusingqongileyo.
-Ndiyayiqonda, ndatshaya kufutshane nefiction yesayensi yeemovie ze-post-apocalyptic. Kodwa yiza, ngumba ophambili apho i-geolocation idlala khona indima ebaluleke kakhulu.
Le nangokuhlanganiswa kwezibonelelo kunye nezixhobo, ukuba iintlanga kunye noorhulumente engcono izigqibo, ukwazi ukuba nokwandisa uqoqosho kunye nendlela yokuphila, nganye kuzo izinto ezikhoyo emajukujukwini ziya kusetyenziselwa ukuba yinxalenye yothotho ulwazi ongapheliyo, oko kubizwa ngokuba yi-IoT (i-intanethi yezinto).
imizekelo umdla mna ngokobuqu ndibone തിരിച്ചറിയല് ukuqondwa yi Singapore, leyo liyifumene isiqinisekiso njengomnye wemizi bakrelekrele ehlabathini, ubonakala ngokuba izithuba enobuchwepheshe, kunye umgudu ukuphumeza nokugcina kokungqinelana ucupho kunye iliso kulo lonke multiple abenzi boluvo, kwakunye umthambo ukuze iqonga elibamba iinkcukacha rhoqo, ngayo izigqibo zingenziwa malunga ekhoyo, nokugcina kujoliswe uzinzo kokusingqongileyo kunye zesakhiwo.
Umbono we-IoT awupheleli nje ekusetyenzisweni kwezinto zokuzivavanya ezintweni, okanye ukugcina ingqokelela yedatha esebenzayo kunye neyodwa yesixhobo ngasinye, kodwa nokuba izixhobo kunye nezenzo ezijolise ekusekweni kweSmartCities zinxibelelene neenkqubo amaxwebhu, uyilo, uyilo-lobunjineli - ulwakhiwo lwe-AEC (kwisichazi sayo kwisiNgesi), ukwakha imodeli yolwazi (BIM) kunye neendlela zolawulo lolwazi ezinje nge-GIS, obu budlelwane ngabo obenza owona mceli mngeni ekumiseni izixeko ezikrelekrele.
Emva kokuba imfuneko ecacileyo yokuba unxulumano iinkqubo ezifana GIS AEC + BIM +, njengoko iliziko ulawulo lolwazi, oko ungxamele kuhlanganiso kunye isixeko umzekelo 3D. Ngenxa yoko impambano lula neyokucwangcisa zomzekelo ekufuphi ukuba zifake ingcaciso ezifana ngubani omntu, kunye neerekhodi zizibonakude yedijithali ukuze esqwini yolawulo ukusebenza kwiinkqubo ezifana lomjikelo wobomi iimveliso (PLM).
Umzekelo weLeica Airborne CityMapper
Ukusetyenziswa kobugcisa 3D ukunceda ukunciphisa ixesha neendleko yokuqokelelwa kwedatha endle, kwaye nangona nje isixhobo ukuhlola abo ukuba nolwamkelo ulungiso ukufaka modeling data, kuba umdla Hexagon ngu Leica Iimpawu zendalo ziboniswe njengenye indlela, ukudala isenzi esithatha iintlobo ezahlukeneyo zedatha ngendlela ehamba ngokuzenzekelayo kunye neyona ndlela, Leica Airborne CityMapper.
Imarike inikezela abenzi boluvo ezifanelekileyo drones image lungabanjwa, infrared, accelerometers, iimitha ukufuma, abenzi ezitalatweni ukulawula ukuhamba kwezithuthi, abafundi ngamasuntswana kwi emoyeni kunye nabanye abathatha ulwazi ngaphakathi kwisithuba ezisentlabathini. Nangona kunjalo, kubonakala ngathi ukuzibophelela kukaLeica Geosystems, ekuziphendukeni kwayo njengomvelisi wembali ekhethekileyo kwingingqi ekufumaneni idatha kunye nokucwangcisa, kuthatha inyathelo elibalulekileyo ngokusungula Leica CityMapper, efuna ukuba ngumsebenzi onjenge-sensor ene-hybrid sensor enezinto ezinje:
Ikhamera ye-bidirectional mechanical ne-resolution ye-80 MP kunye ne-Nadir.
Iimakhamera ezine ezineekhamera ezinezikhokelo zendiza, i-RGB yesisombululo se-80 MP kunye ne-angle yokujikeleza ye-45º yokujonga ukuthatha imifanekiso eblique.
Inkqubo yeLidar, ukuphindaphinda kwamaxesha e-700 Hzs, i-oblique scanner yamaphetheni ahlukeneyo, i-40 degrees yommandla wombono, uhlalutyo lomtshini kunye neempawu ngexesha langempela.
Yenzelwe ukusebenza kweemephu zedolophu kunye nemodeli yazo yasezidolophini, oko kukuthi, iya ngaphaya kwe-geolocation yezinto, inokwenza ii-orthophotos, amafu ekhomba, i-DEM kunye nemodeli ye-3D; Ke iHekagon enoluvo ifuna ukubonelela ngomgca wayo isixhobo esibalulekileyo kuphuhliso lweeSmartCities; ukunceda ukuqonda ukusebenza kobume bendalo kunye namandla ezixeko. Ulwakhiwo lwayo oluntsonkothileyo lubandakanya ukubanjwa kwenani elikhulu ledatha kwindiza enye, umba ongenzeki ngee-sensors ezikude eziqhelekileyo, ezinje ngeSatellite yasemhlabeni yokujonga, i-GNSS, okanye iiradar.
Nangona, ubukho beendawo zendawo eziza kubonelela ngolunye ulwazi olongezelelweyo aluyi kuhoywa; Ngalesi senzo esitsha, akuyimfuneko ukuba ukhethe phakathi kweemveliso, ezifana nomfanekiso okanye ifowuni, kuba yonke ingcaciso iya kuba sele iyindiza enye.
Le sensor ene-airborne iyakwazi ukuthatha ngokukhawuleza nangokufanelekileyo ukusuka kwiidolophu ezincinci, ukuya kwizixeko ezinobuninzi bezidolophini, ekuncedeni ukuphepha ukusetyenziswa kwemithombo yezemali kwiiplani ezininzi zokuhamba okanye iinjongo zohambo
Ukusebenzisa ubuninzi beenkcukacha ezenziwe yilo nzwa, uLeica unikeza inkqubo, ebizwa ngokuba yiyunithi yesikhombi sokusebenza, okubandakanya imisebenzi esuka ekubanjweni, ukucwangciswa kwedatha nokubonakalisa kwedatha, kwi-software ekhethekileyo ebizwa ngeHxGN.
Baye bafuna ukuba le software ibe lula kwaye inomdla, ngamanyathelo athile akhokela umsebenzisi ukuba avelise imveliso abayifunayo. Kubandakanya ukuhamba komsebenzi ukuze iimveliso ezivela ekubambeni zenziwe ngendlela ekhawulezayo; Imveliso nganye ineqhosha lesenzo. Nangona isoftware ibonelela ngesixhobo esibonakalayo esilula, ikwafuneka amagcisa okanye abahlalutyi abanamava ekusingatheni olu hlobo lwedatha.
Kungenzeka, ngokwemiqathango, ukufaka iilayisensi ezininzi ezihambelana nedatha efunyenweyo. I-HxGN, yenzelwe ukuthumela inkqubo yeenkcukacha ezininzi ezenziwe yi-CityMapper, ngokusebenzisa iimodyuli zayo ezintathu: RealWorld, RealCity kunye RealTerrain.
RealWorld: yenzelwe iiprojekthi ezibandakanya imifanekiso emikhulu, iquka imodyuli ye-generator okanye i-ortho ebonakalayo, ulwazi lwefayili yenkcazelo.
I-RealTerrain: sisisombululo sasemva kokuqhubekeka kwedatha yeLidar yemimandla emikhulu kunye noxinaniso lolwakhiwo oluphezulu. Kubandakanya imodyuli ye-ortho generator-orthomosaics, ulwazi lwelifu kunye nokungena, ulungelelwaniso oluzenzekelayo, kunye neemeta zedatha.
I-RealCity: yinkomfa yenkxaso ye-SmartCities, evumela ukuba kuveliswe imodeli ye-3D yezakhiwo ezithathiweyo. Iquka i-ortho modorator generator - ortomosaics, ulwazi lwefayili yenkcazelo, i-modeler yeedolophu, imephu ye-texper kunye ne-3D umhleli.
Ngokuqinisekileyo ngumceli mngeni onamandla kwinto ekhangelwa yiBentley Systems, enento efana ncam naleya siza kuthetha ngayo ngomnye umzuzu, ngeContextCapture, iCityMapper kunye namaqela eTopcon. Kuhleli kubonakala ukuba i-Esri / AutoDesk duo iyisingatha njani le nto, eya kuthi ithathe ixesha ukudibanisa izixhobo ezineendlela zazo ezinje ngeDrone2Map, iRepap, i-Infraworks, ishiya umceli mngeni wokudibanisa umenzi wezixhobo kunye nombono ongqinelanayo. I-Trimble ikwaphethe enye indlela.
Uvavanyo kunye nezicelo
Enye yeemvavanyo zoluvo lwentloko yenziwa yinkampani Bluesky Ukusuka e-United Kingdom, kukhenketho lokuhlola ubuchwephesha obunomdla. Umfanekiso ubonakalisa ngaxeshanye ngaphambi nasemva kokubanjwa, kunye nelifu lengongoma elinxulumene nolwakhiwo olukule ndawo. Ukuchaneka kwedatha ngokubhekisele kulwakhiwo lwantlandlolo kubonisa ukubaluleka kwesi sixhobo kwikamva lezixeko.
ULeica uye wabonisa ukuba akayigqiba umsebenzi wakhe neSixeko iMapper, kuba kufuneka bahlakulele ngokukhawuleza umsebenzi wokuvelisa kunye neendlela eziphambili ze-orthophotos kwiindawo ezinkulu ezihlala kuyo. Ukusetyenziswa kwesi senzwa kunemizekelo ethile yezicelo, apho zingathiwa khona:
Cadastre kunye noCwangciso,
Ukuphendula ngokukhawuleza kwiimeko ezikhawulezayo,
Ukubeka esweni izilwanyana zesixeko,
U khu seleko,
Ukuphunyezwa technologies ezifana Leica CityMaper kubalulekile ukuba SmartCities, njengoko ibonisa kuphela indawo zonke iziqalelo isithuba, kodwa ebonisa isakhiwo sayo, ekuhlanganiseni olu lwazi nge esabangela kwezinye abenzi boluvo ezifana obushushu nokufuma yendalo, ukukwazi ukubonisa indawo apho ubuninzi bezidolophini benyuke amaqondo okushisa okanye aguqula isimo sezulu.
Impembelelo kwindlela yethu
Ukuba kukho into enye esingenakuyiphepha, kukuba ubuchwephesha balo mda buya kutshintsha (kwakhona) kwaye bube lula indlela esenza ngayo izinto namhlanje kwifoto yeefoto, imephu, uyilo lweziseko zophuhliso kunye noshishino lolawulo lweeasethi. Yiyo loo nto inguquko yesine ingekude kangako, nangona ingekhoyo yonke imiqathango yokwenziwa kobunzima kuwo onke amashishini, kodwa baya kuseta ithoni kwimiba esele isebenza kule nzwa njengeerobhothi, ukuhambisa, ukugcinwa kunye nolunye usetyenziso lwezixhobo zendalo, ezinje ngamandla. -Ukwazi ukuba ukubanjwa kwemifanekiso kwenzeka ngamandla elanga, kunye neempuphu ezikhutshwe sisandi kwimeko yeLidar-. Ke kwizicelo sibona ukubanakho kwayo kwimiba ejongwe kwii-SmartCities ezinje ngobunyani bokwenyani, ukulinganisa kuluncedo njengokuthintela ukuba semngciphekweni kwaye nokusetyenziswa kungabinamsebenzi kodwa kunenzuzo kwezoqoqosho njengemidlalo yevidiyo.
Nangona ebambekayo yam ukungxamiseka iiteknoloji ezintsha ezivelayo, elundini ejonge ethembisayo, nangona ukwamkelwa kwabo ngamashishini kunye neengcali Geo-zobunjineli iya kukhula kangangoko izisombululo ziyimfuneko bamba nokuba ngumzekelo Ulwazi olufana nokuhlaziywa okulawulwayo kunye nokuvula ukudibanisa kwizicwangciso zomsebenzisi wokugqibela.
Bona okunye ukusuka kuLeica CityMapper
Post edlulileyo«Ngaphambilini Indima ye-geotechnologies ekuhambiseni i-3D Cadastre
Post Next Amava okufunda nokufundisa i-BIM kwimiqathango eqhelekileyo kwiCADOkulandelayo »